ဒီစာဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး / မိုးဇက်သေပီ | မိုးဇက်
ဒီစာဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး / မိုးဇက်သေပီ
Posted on Thursday, 29 December 2011
ဒီစာဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး ၊ ကြိုပြောထားမယ်ဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင်ဆက်မဖတ်ပါနှင့် ဒီဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး ။ ခင်ဗျားတို့ ဖတ်လဲလုံးဝ အကျိုးမရှိဘူး ၊ ဆက်မဖတ်နှင့်နော် ။
လောကမှာ ဘယ်အရာကိုမှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကောင် တစ်ယောက်အကြောင်းခင်ဗျားတို့ကြားဖူးလား ၊ သိသလား ၊ လောကဓံရဲ့ အချိုးအကွေ့တွေကို ခပ်မိုက်မိုက်ကြုံခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ် ၊ ခုထိအရေမထူသေးဘူး ၊ ခင်ဗျားသိလား လူတစ်ယောက်ရဲ့ သုညတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဝခါးတွေအကြောင်း ၊ ဟောဒီမိုးဇက်ပဲ ။ မယုံရင် မိုးဇက်ရင်ဘက်ထဲကို လက်တစ်ဆုံးနိုက်ကြည့်လိုက် ၊ ဗလာ ၊ သုည ။ သုညတောင် အညတရ သုည ၊
ကျွန်တော်ပြောတယ် ဆက်မဖတ်နှင့်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊ ဖတ်နေလဲ အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှလုံးသား မရှိတော့တဲ့ ဟောဒီမိုးဇက်ရေးထားတာ နှလုံးသားနှင့်ဖတ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့အတွက် မျက်စိညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်မယ် ။ ဟုတ်တယ် ဘာဆိုဘာမှ သုံးစားမရတဲ့ဟောဒီကောင်ကို ချစ်သူမပြောနှင့် ဘယ်ကောင်မလေးကကော တစ်ဘဝစာမျှော်တွေးရဲမှာလဲ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ အထင်ကြီးစရာမရှိလို့ ဘယ်သူမှလဲ ကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးဘူး ၊ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ အထင်မကြီးဘူး ။ မွေးကတည်းက သိမ်သိမ်ငယ်ငယ်လေး ၊ ကြီးလာတော့လဲ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်လေး ၊ လောကကြီးကို ဂြိုလ်သားတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံနေတာ ၊ ဘယ်လိုမှ လူ့လောကအကြောင်းကိုနားမလည်ဘူး ၊ လူ့လောကကြီးကလဲ ဘယ်တုန်းကမှ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်ပေးမှုမရှိဘူး ။ ဒါပဲ မိုးဇက်ဆိုတာ ။
ကဗျာမဟုတ်ဘူးနော် ၊ အသေအချာ ကျမ်းကျိမ်ပီးပြောမယ် ဆက်မဖတ်နှင့်တော့ ဒီနေရာကပဲ ရပ်လိုက်တော့ ဒါဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး ၊ အမြဲလိုလို နောက်ကျနေတတ်တဲ့ကောင် ၊ ခုကိုယ့်အသက်က ကျင်းနခမ်းကို ခြေတစ်ဘက်လှမ်းနေပီ ခုချိန်ထိ အတွေးအခေါ်တွေလူလားမမြောက်သေးဘူး ၊ ဟောဒီကောင် မိုးဇက် အရေပြားတွေက ဇယာပိုင်းကို သွင်ကျူးနေပေမယ့် ဘဝရဲ့နေရေးထိုင်ရေးတွေကို ခုမှဇယားခင်းနေတုန်း ၊ ခင်းမလို့ပြင်နေတုန်း ၊ ဘာဆိုဘာမှ သုံးမရတဲ့ကောင်အကြောင်းဆိုတော့ သုံးမရတဲ့စာကြောင်းတွေပဲ ၊
မောတယ် ၊ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောရတာမောတယ် ဆက်မဖတ်နှင့်တော့ ခင်ဗျားတို့ အာရုံနောက်တာပဲ အဖတ်တင်မယ် ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူး ၊ လုံးဝ ဆက်မဖတ်ပါနှင့် ၊ ဒါဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်း သွေးဆုတ်သွားတဲ့နေ့ရက်တွေ ခုချိန်ထိရှိတယ် ၊ ဒီဇင်ဘာနှင့်အတူ ……… လွတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ ဗလာကောင်တစ်ယောက်အကြောင်း ၊ ဒီလိုလေးပါပဲ ဘဝကို မဖြူစင်နိုင်တော့တဲ့ မျက်လုံးတွေနှင့် မမြင်ဝိုးတဝါး လျှောက်နေတဲ့ကောင် ၊ ဗလာပဲ……………..ဗလာမှ ဘာအဆက်အပျောက်မှ မရှိတဲ့ဗလာ …………….
ကဲခုလိုပဲ ဘလော့လေးမှာ မတောက်တစ်ခေါက်ခံစားချက်လေး ချရေးပီး ၊ ကဗျာလို့နာမည် တတ်တဲ့ကောင် ၊ ဟိုအိမ်လျှောက်လည် ဒီအိမ်လျှောက်လည် ၊ လက်ကမျင်း ၊ တွေ့ကရာ လိုက်နောက်နေတဲ့ကောင် ၊ ဘာမှသုံးမရတဲ့ကောင် ၊ ခင်ဗျားတို့ အပြင်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့ မိုးဇက် ၊ ခပ်တည်တည်နှင့် ကဗျာဆရာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ကောင် ၊ ကဲ ခုတော့………. ဝိဥာဉ်တွေ ဆုတ်ချည်ခွာချည်နှင့်သေတော့မယ် ၊ ခေါ်သံတွေသဲ့သဲ့ကြားနေရပီ ၊ ဝေဒနာတစ်ခုကို ခပ်မျင်းမျင်းလေးမြည်းစားရင်း သေမင်းအလာကို ဆောင့်နေပီ ၊
ငါ့အသုဘကို ဘယ်သူမှလိုက်ပို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ၊ ငါဟာ သုညဆိုတဲ့ဗလာကောင်မိုလို့ပဲ ၊ ဟုတ်တယ် ဒါပဲ ၊ မိုးဇက် သေတော့မယ် ဒီဇင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ “ ဟုတ် ” ကနဲ သေဆုံးတော့မယ် ၊ ဒီဇင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာ မိုးဇက် သေပီ ၊
ခင်ဗျားကို ပြောတယ် ဒါဟာ ကဗျာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ၊ ခုတော့ အဆုံးထိလဲ ခင်ဗျား ဖတ်လိုက်ရတယ် ၊ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်အကြောင်း ဘာမှအကျိုးမရှိပဲ ၊ ဘာအတွက်မှ အချိန်ကုန်ခံပီး ဆက်မဖတ်နှင့်တော့ ဒါဟာ
6 thoughts on “ဒီစာဟာ ကဗျာမဟုတ်ဘူး / မိုးဇက်သေပီ”
Thameesan on 29 December 2011 at 10:08 said:
Candy on 29 December 2011 at 17:59 said:
အဟင့် ရွှတ် ဖတ် :P
ကန်ဒီပို့လို့ရရင် လိုက်ပို့မှာပါ အသုဘကို.. :(
ဗိုက်နာတာနဲ့ မသေလောက်ပါဘူး.. ဆေးမှန်မှန်သောက်နော် :(
ကိုရင် on 30 December 2011 at 09:58 said:
ပြုသမျှကိုသာဓုခေါ်ပါ..အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူပါ.. :D
ကိုတူး on 30 December 2011 at 21:22 said:
ဟေ..မိုးဇက် စိတ်ကိုထိန်းပါဗျ.. ကျွန်တော်တစ်ယောက်လုံးအဖေါ်ရှိပါသေးတယ်.. ခင်ဗျားသေရင်ကျွန်တော်လည်း မနေဘူး လိုက်သေမယ် :D
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး on 30 December 2011 at 22:09 said:
ချစ်စံအိမ် on4July 2012 at 12:01 said:
ဆက်မဖတ်နဲ့ ဆိုလို့ ဆက်ဖတ်လိုက်တယ် :P
အဝါရောင်လမ်းနံပါတ် / ၁၂
ကာရံများသေဆုံးသွားသော ( ခေါင်းစဉ်မဲ့ ) ကဗျာ
နက်ဆိုး(Demon) နှင့် ဆေးကျောင်းသား
သူမရေးထိုးတဲ့ ငါကိုယ်တိုင်သိခွင့်မရတဲ့ ငါ့နံပါတ်
ရောမအင်ပါရာ ပျက်စီးခန်းကို တို့ဆောင့်ကြည့်နေတယ်
ဝင်သက်ထွက်သက် အသက်ခံရတဲ့ D ချစ်ခြင်း